ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများ၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် လျှောက်လွှာတင်သည့် ကျောင်းဆရာများကို ဧပြီလအတွင်း လူတွေ့စစ်ဆေးမည်
Submitted by Pho Lapyae on Thu, 03/23/2017 - 12:46
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ခွင့်ပြုပေးထားသည့် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများ၌ လျှောက်လွှာတင် ထားသည့် ကျောင်းဆရာများကို ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဆရာမှတ်ပုံတင်များချထားပေးရန် ဧပြီလအတွင်း လူတွေ့ စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းပညာရေးမှူးရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦးက ပြောသည်။
Read more about ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများ၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် လျှောက်လွှာတင်သည့် ကျောင်းဆရာများကို ဧပြီလအတွင်း လူတွေ့စစ်ဆေးမည်
နာဂဒေသတွင် ဖြစ်ပွားသော ရောဂါသည် ၀က်သက်ရောဂါ မဖြစ်နိုင်ဟု စစ်ကိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ မြင့်နိုင် ပြောကြား
Submitted by Zay Thu on Wed, 08/10/2016 - 13:37
''၀က်သက်ဆိုတာ ဆရာလည်း ဆေးကုလာတာ။ ၀က်သက်လောက်မှ မမြင်ဘူးရင်တော့ ဆေးမကုနဲ့လေ'' - ၀န်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာမြင့်နိုင်
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး၊ နာဂကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွင် လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော ရောဂါသည် ၀က်သက်ရောဂါ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာမြင့်နိုင်က သြဂုတ် ၆ ရက်တွင် အတည်ပြု ပြောကြားသည်။
Read more about နာဂဒေသတွင် ဖြစ်ပွားသော ရောဂါသည် ၀က်သက်ရောဂါ မဖြစ်နိုင်ဟု စစ်ကိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ မြင့်နိုင် ပြောကြား
Read more about အိမ်မက်များကိုချနင်း နစ်ပြီးရင်း နစ်လာတဲ့နွံ - ပိုင်လေး
ချစ်ခြင်း၏ နောက်ကွယ်မှ ကာမ မုဆိုးများ အန္တရာယ် - နော်ရာမောင်
Submitted by Zay Thu on Fri, 01/08/2016 - 16:24
“မသွားချင်ဘူး...မ၀င်ရဲဘူး...”လို့ အတွင်တွင် ငြင်းနေတဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ မျက်နှာထား ခပ်တည်တည်နဲ့ ဆွဲလွဲနေတဲ့ ကောင်လေးတို့ အနားက ဖြတ်လျှောက်မိကာစက သူတို့ဘာတွေ ဖြစ်နေကြမှန်း မရိပ်မိခဲ့ပေမယ့် ကိစ္စတစ်ခုအတွက် အငြင်းအခုန် ဖြစ်နေကြတာလို့တော့ သိနေခဲ့ပါတယ်။
Read more about ချစ်ခြင်း၏ နောက်ကွယ်မှ ကာမ မုဆိုးများ အန္တရာယ် - နော်ရာမောင်
ကြယ်ကိုအမိုးလုပ်... လမ်းမကို ကျောခင်းနေရပေမယ့် အနာဂတ်မှာ ဘော်ဒီရုံပိုင်ရှင် ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ ခုံးကျော် တံတားအောက်က ဘ၀တစ်ခု - လျှမ်းလူ
Submitted by Zay Thu on Fri, 09/25/2015 - 17:24
“သား သူတို့တွေကို အရမ်း ကြောက်တယ်။ အဲဒီ အထဲမှာတုန်းက အရမ်း ရိုက်ခံရတယ်။ ထမင်းလုံး တစ်စေ့ ကျတာနဲ့ ၁၀ ချက် အရိုက်ခံရတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ အ၀တ်အစား တွေကိုလည်း လျှော်ပေးရတယ်။ အ၀တ်တွေ မပြောင်ရင်လည်း အရိုက်ခံရတယ်။ ပထမတစ်ခါ ရောက်သွားတုန်းက သားကို ရိုက်တာ တစ်ကိုယ်လုံးနာပြီး ၃ရက်လောက် ဖျားတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့က အလုပ်တွေ ဆက်ခိုင်းတယ်။ အဲဒီမှာရှိတဲ့ သူတွေကို သားအရမ်း ကြောက်တယ်။ သား နောက်တစ်ခါ ပြန်မသွားချင်ဘူး”ဟု ပြောရင်း တစ်လိမ့်လိမ့် ကျလာသော မျက်ရည်များကို ပေရေနေသော လက်ခုံဖြင့် ပွတ်ချရင်း ပြောပြခဲ့သူက လှည်းတန်း ခုံးကျော်တံတား အောက်တွင် ကြုံသလို နေနေရသော အသက် ၁၀နှစ်အရွယ်ရှိ ဖိုးတေဟုခေါ်သော ကလေးငယ် တစ်
Read more about ကြယ်ကိုအမိုးလုပ်... လမ်းမကို ကျောခင်းနေရပေမယ့် အနာဂတ်မှာ ဘော်ဒီရုံပိုင်ရှင် ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ ခုံးကျော် တံတားအောက်က ဘ၀တစ်ခု - လျှမ်းလူ
Gender ခွဲခြားမှု... တာဝန်... လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မများရဲ့ အနာဂတ် - နော်ရာမောင်
Submitted by Zay Thu on Fri, 09/04/2015 - 17:58
"နေမကောင်းလည်း မတတ်နိုင်ဘူးလေ ကလေးတွေ ကိစ္စဆိုရင် ငါပဲလုပ်ရမှာပဲ၊ သူကသူ့နားရက် တစ်ရက်ပဲ ရတာဆိုပြီး မိသားစု ကိစ္စတွေကို ဘာမှကူညီပေးချင်တာ မဟုတ်ဘူး၊သူ့ကိုစိတ်ပျက်လို့ ဘာမှထပ်မပြောချင်တော့ဘူး၊ သူကသူ တစ်ယောက်ပဲ ဒီမိသားစုကို ဦးဆောင်ရှာကျွေး နေရတယ်ဆိုပြီး ငါ့ကိုကျွန်လို့ပဲ သတ်မှတ်ထားပုံပဲ ငါအရမ်း ရုန်းထွက်ချင်နေပြီ သူငယ်ချင်း"လို့ ဆိုလာသူက ကလေးနှစ်ယောက် မိခင် အသက် ၂၉နှစ်အရွယ် အိမ်ရှင်မ ဝေေ၀။
Read more about Gender ခွဲခြားမှု... တာဝန်... လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မများရဲ့ အနာဂတ် - နော်ရာမောင်
နိုးလော့…. ထလော့ ဧရာဝတီ
Submitted by Zay Thu on Mon, 08/31/2015 - 17:20
Read more about နိုးလော့…. ထလော့ ဧရာဝတီ
ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး သာပေါင်းမြို့နယ်သို့ Tomorrow Journalနှင့် လူမှုကူညီရေး အဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်း၍ ကူညီထောက်ပံ့ရေး ပစ္စည်းများ သွားရောက်လှူဒါန်း
Submitted by Zay Thu on Fri, 08/28/2015 - 14:46
ဧရာဝတီ ဖောင်ဒေးရှင်း မိသားစု၊ ထိုင်း-မြန်မာ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းအဖွဲ့အစည်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာအလုပ်သမားများ လူမှုကူညီထောက်ပံ့ရေး မဟာချိုင်၊ ဗန်ထိုလတ် အခြေစိုက် အဖွဲ့အစည်းနှင့် Tomorrow Journalတို့မှ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်ရှိ ရေဘေးသင့် ပြည်သူများ အတွက် ကူညီထောက်ပံ့ရေး ပစ္စည်းများ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့သည်။
Read more about ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး သာပေါင်းမြို့နယ်သို့ Tomorrow Journalနှင့် လူမှုကူညီရေး အဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်း၍ ကူညီထောက်ပံ့ရေး ပစ္စည်းများ သွားရောက်လှူဒါန်း
KBZ နဲ့ Tomorrow, ဘကြီးဖြိုးနဲ့ ဦးနေ၀င်း, ဂန့်ဂေါမှသည် ကံမအထိ
Submitted by Zay Thu on Sun, 08/23/2015 - 00:18
တနင်္ဂနွေနေ့နံနက် စောစောတွင် လွိုင်ကော်မှ ဖုန်းဝင်လာသည်။ အဓိက အကြောင်းအရာမှာ တစ်နိုင်ငံလုံး ရေဘေးသင့်နေသည့် ကိစ္စ။ အဓိက ဘာပစ္စည်းတွေလိုနိုင်သလဲဟု မေးသည်။ နာဂစ် အတွေ့အကြုံအရ ဆန်၊ဆီ၊ရေသန့်ဆေးပြား၊ ခြင်ဆေးခွေနှင့် ဓာတ်ဆားဟု ဖြေလိုက်သည်။
Read more about KBZ နဲ့ Tomorrow, ဘကြီးဖြိုးနဲ့ ဦးနေ၀င်း, ဂန့်ဂေါမှသည် ကံမအထိ